I-São Tomé ne-Príncipe bathola amaRandi ayizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyishumi nesikhombisa ku-African Development Fund
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Sao Tome ne-Principe Breaking News » I-São Tomé ne-Príncipe bathola amaRandi ayizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyishumi nesikhombisa ku-African Development Fund
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Investments • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • I-Sao Tome ne-Principe Breaking News • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Isikhwama Sentuthuko yase-Afrika selula isibonelelo esiyizigidi ezingama-USD 10.7 ukuxhasa ama-SME kwezolimo nezokuvakasha eSão Tomé nasePríncipe.
Iphrojekthi ihlose ukwenza ngcono indawo yebhizinisi ngokususa izithiyo ezithile ezivimbela ukukhula okuholwa imikhakha ezimele.
Le phrojekthi izophinde iqinise amandla nokufinyelela ezimakethe nezikweletu zamabhizinisi amancane naphakathi (ama-SME) ngokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe kanye nokuthuthukiswa kwamabhizinisi.
Izwe linamandla amakhulu kwezolimo, izinsizakalo, kufaka phakathi ezokuvakasha kanye nomnotho oluhlaza okwesibhakabhaka, imikhakha emele ngaphezu kwe-70% yemisebenzi yezomnotho.
Ibhodi labaqondisi be- Isikhwama Sentuthuko yase-Afrika (i-ADF) ivunyelwe ngoLwesithathu e-Abidjan, isibonelelo semali eyizigidi ezingama-US $ 10.7 eziya eSão Tomé nasePríncipe ukuze kusetshenziswe isigaba sokuqala seZuntámon Initiative, ngaphakathi kohlaka lweLusophone Compact.
Iphrojekthi ihlose ukwenza ngcono indawo yebhizinisi ngokususa izithiyo ezithile ezivimbela ukukhula okuholwa imikhakha ezimele. Le phrojekthi izophinde iqinise amandla nokufinyelela ezimakethe nezikweletu zamabhizinisi amancane naphakathi (ama-SME) ngokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe kanye nokuthuthukiswa kwamabhizinisi. Lokhu ekugcineni kuzokwenyusa umnikelo wabo emnothweni nasekudalweni kwamathuba emisebenzi futhi kwakhe nomnotho oqinile.
Ngaphezu kwama-SME, le phrojekthi izohlomulisa abatshalizimali nezikhungo ezeseka amabhizinisi njenge-Trade and Investment Promotion Agency, izinhlangano zamabhizinisi nezinhlangano ezisekela amabhizinisi, izikhungo zezezimali kanye ne-Central Bank yaseSão Tomé nasePríncipe. Ukuqaliswa kwephrojekthi kuzoholela ekwehlisweni kwenani lezinsuku ukuxazulula izingxabano ezentengiselwano ezisuka ezinsukwini eziyi-1,185 kuya kwezingama-600 ngokuqinisa amandla esikhungo sokulamula kanye nohlelo lwezinkantolo zezentengiselwano, nangokuqinisa imvelo yebhizinisi ukukhulisa isibalo samabhizinisi abhalisiwe.
“Le phrojekthi izokwakha amandla ezikhungo ezibucayi zikaHulumeni waseSao Tome ngenkathi ithuthukisa isimo sebhizinisi sokuthuthukisa umkhakha ozimele. Izokhuthaza futhi igqugquzele ukwenziwa ngokusemthethweni komnotho ongakahleleki ukuze kudaleke amathuba emisebenzi amaningi futhi abe ngcono, ikakhulukazi kwabesifazane nentsha elawula imikhakha engakahleleki. ” kusho uNksz Martha Phiri, uMqondisi, uHuman Capital, Youth and Skills Development (AHHD).
I-Zuntámon Initiative izogxila ekungeneleleni kwayo ezintweni abesifazane nabasha abazinikela kuzo, kanye nemikhiqizo yokuthekelisa enekhono eliphezulu lokukhula njenge-cocoa, ukhukhunathi kanye nemikhiqizo ye-horticultural. Ukugxila kule mikhiqizo nezinsizakalo kuhambisana nohlelo lukaHulumeni waseSão Tomé nasePríncipe lwe-post-COVID-19 isu lokuvuselela umnotho, elibeka phambili ukusekelwa kwamabhizinisi athinteke ubhadane nokululama ezimbonini ezibalulekile ezifana nezolimo, ezokudoba, ezokuvakasha kanye nokungenisa izihambi.
"Ngemuva kokuxhasa impendulo ye-COVID ngomsebenzi wokuxhasa isabelomali ngonyaka ka-2020, iBhange manje selihamba phambili ekululameni kwangemva kobhadane eSão Tomé nasePríncipe ngendlela entsha ephendula izinselelo ezithile ezibhekene nomkhakha ozimele ezincane ezomnotho ezingekho ngaphakathi, ”kusho uMnu Toigo, oyiMenenja Yezwe Yasebhange eSão Tomé nasePríncipe.
Le phrojekthi ihambisana neMisebenzi yeBhange Yamasu Wentsha ye Africa futhi uphendula izinhloso ze-Lusophone Compact ngokukhuthaza ukuthuthukiswa komkhakha wangasese obandakanya wonke umuntu futhi ozinzile, ngenkathi ufaka isandla kwiQhinga Lezwe Lokuthuthukiswa Kwemikhakha Yangasese lango-2015-2024.
Impilo Entsha yeBluefields Westmoreland Jamaica
I-Facebook ifile, phila ende i-Meta!
I-Greek Tourism iqhubekela phambili ekubuyiseleni kabusha ngo-2022
Ukungena kwamaselula kuyabuya ezindizeni zeLufthansa
Imizi eyi-10 ehamba phambili yokuphila ebusuku kwabafundi emhlabeni
I-Air Canada ingeza umthamo owengeziwe eVancouver
I-UNWTO Ivimba I-Critical Press Emakethe Yezokuvakasha Yomhlaba